Tsy Voasakan’ny Sisin-tany ny Fitiavana
MBOLA tsy teraka akory i Sanel kely, dia efa nilaza tamin’ny ray aman-dreniny ny dokotera fa harary mafy io zaza io raha teraka soa aman-tsara ihany. Tsy maintsy nodidiana àry izy tamin’ny vao teraka. Tsy nisy dokotera nanaiky hanao fandidiana tsy ampiasana ra anefa tao Abkhazie, izay nisy azy mianakavy. Io ilay faritra nitaky fahaleovan-tena tamin’i Géorgie.
Niresaka tamin’ny Komity Mifandray Amin’ny Hopitaly (KMH) * izy mivady. Faly izy ireo fa vetivety ny KMH dia nahita dokotera vonon-kanampy teto Tbilissi, renivohitr’i Géorgie. Mbola narefo anefa ny renin’i Sanel ka tsy afaka nankatỳ. Ireo reniben’ilay zaza àry no nitondra azy tao amin’ny hopitaly teto. Samy Vavolombelon’i Jehovah izy ireo.
Vita soa aman-tsara ilay fandidiana. Nanoratra toy izao ireo reniben’ilay zaza, tsy ela taorian’izay: “Nijanona 20 andro mahery tao amin’ny hopitaly izahay. Be dia be ny ranadahy sy rahavavy géorgien nitsidika anay sady nanome tanana. Maro no nalahelo an’i Sanel kely. Efa hitanay tamin’ny bokintsika hoe be fitiavana ny mpiara-manompo, fa izao izahay mihitsy no mahatsapa an’izany.”
^ feh. 4 Nahita dokotera 250 mahery manaiky hanao fandidiana tsy ampiasana ra ny KMH eto Géorgie.
Maro ny hevi-diso aelin’ny olona momba ny Vavolombelon’i Jehovah sy ny fampidiran-dra. Fantaro ny tena marina momba ny zavatra inoanay.